Al-Shabaab oo sheegtay in ay saaka weerar ku galeen saldhigga ciidamada badda Mareykanka ee Camp Simba – Banaadir Times
Al-Shabaab oo sheegtay in ay saaka weerar ku galeen saldhigga ciidamada badda Mareykanka ee Camp Simba
By banaadir 5th January 2020 129
Al-Shabaab ayaa weerar xooggan ku qaaday waaberigii hore ee saaka Saldhig Ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaanka Manda Bay ee Gobolka Lamu.
War ka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in Guutadooda Istish-haadiyiinta ay weerar ku qaadeen Saldhigga SIMBA ee ku yaala deegaanka Manda Bay, qoraalo ku qornaa luqadaha Carabiga iyo English-ka ayay Al-Shabaab ka soo saartay faah faahita weerarkaas.
Saldhigga la weeraray ayaa waxaa ku sugnaa Ciidamo Mareykan ah oo tababarayaal u badnaa, kuwaasoo tababara Ciidamada Badda Kenya.
Warka ka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in saldhigga Camp Simba ay ku sugan yihiin boqolaal ka mid ah Ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya, waana mid ka mid ah saldhigyada laga soo qaado duulaanka Mareykanka ee ka dhanka ah Islaamka.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka dowladda Kenya, sidoo kale si dhab ah looma oga khasaaraha ka dhashay weerarka, hase ahaatee baraha Internet-ka ee Al-Shabaab ayaa lagu qoray inuu jiro khasaare hordhac ah oo ay u geysteen ciidamada ku sugan xeradaas.
Wararkii ugu dambeeyey dadaallo laga dhex waday Villa Somalia iyo XAAF
Guddiga Amniga Qaranka oo hortagaya Madaxda ku shirsan Xerada Afisiyooni
By banaadir 25th March 2021
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre Oo Shir-guddoomiyay Kulanka Todobaadlaha ah ee SMP3
By banaadir 13th August 2018
Deg deg ah qarax hadda ka dhacay Magaalada Laascaanood ee gobalka Sool
By banaadir 2nd March 2020